स्मार्ट सिटीका लागि नेपाल तयार... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
स्मार्ट सिटीका लागि नेपाल तयार छ?
पछिल्लो समय स्थानीय देखि संघीय सरकार सबैका नारा स्मार्ट सिटी हुने गरेको छ। राजनीतिक तहबाट आएका यस्ता नारा त कतिपय सार्वजनिक खपतकै लागि हुन्छन्। कार्यान्वयनको सम्भाव्यता नै हुँदैन। तर के साच्चै नेपालमा स्मार्ट सिटी अहिले नै बन्न सक्छन्? प्रश्न भने सबैतिर उठु्ने गरेको छ।
समार्ट सिटीको इकोस्टिम कस्तो हुन्छ? कसरी बन्छ यस्तो सहर? यसका सैद्धान्तिक र इन्जिनियरिङका बारेमा सरकारी तहबाटै पनि अध्ययन भइरहेका छन्। यद्यपी यसको सम्भाव्यता तत्काल कति छ?
काठमाडौं लगायत सहरी क्षेत्रलाई स्मार्ट बनाउनका लागि सेवा उत्पादन गरिरहेका केहीले भने नेपाल स्मार्ट सिटीका लागि तयार भएपनि पूर्वाधारको अभाव भएको बताउछन्। राजधानीमा आज आयोजिदत सुविसु कन्क्लेभ २०१९ मा बोल्दै उनीहरुले स्मार्ट सिटीका लागि मान्छे जहिले पनि तयार हुने तर त्यसका केही अनिवार्य पूर्वाधारको अभाव भएको उनीहरुको धारणा छन्।
भेजल टेक्लोजीमार्फत् स्मार्ट प्रडक्ट तथा सेवा उत्पादन गरिहरका अशोक सुवेदी देश जहिले पनि स्मार्ट सिटीका लागि तयार हुने बताउछन्।
‘अवस्य पनि नेपाल अहिलेमात्र होइन पहिले पनि तयार थियो, घण्टौ ट्राफिक जाममा पर्न कसलाई रहर होला, सेवा लिंदा लामो लाइन बस्न कसलाई मन लाग्ला? प्रत्येक दिन पानीको मोटर अनअफ गर्न कसैलाई सजिलो लाग्दैन तर पनि गर्नैपर्छ किन भने हामीसँग स्मार्ट लाइटको व्यवस्था छैन,रिमोट प्रविधि सर्वसुलभ भइसकेको पनि छैन’ उनले भने।
स्मार्ट सिटीका लागि सर्वत्र प्रविधिको विकास र विस्तार, साक्षरता जस्ता कुरामा सरकारी सहजीकरण आवस्यक हुने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता पाइला टेक्नोलोजीका सागर श्रेष्ठले नेपाल विस्तारै तयार हुने बताउछन्। नेपालमा डिजिटल साक्षरता विस्तारै विकास हुँदै गएको र यसले भविष्यमा स्मार्ट सिटीको वातावरण बनाउने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १, २०७६, १७:५६:००